Android ဖုန်းကိုအသုံးပြု၍ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်း - နည်းပညာ
5/07/2013 05:55:00 AM နည်းပညာ No comments
Android ဖုန်းကိုအသုံးပြု၍ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်း
Android ဖုန်းကိုအသုံးပြု၍ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကနေ ကိုယ့်ဖုန်းကင်မရာကနေတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းအနေနဲ့ live လွှင့်လို့ရပါတယ်။ အောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ရှုရအောင်။
မိမိတို. ရဲ့ ဖုန်းမှာထဲ့သွင်းထားယုံနဲ့ Free Live အစီအစဉ်များကိုကြည်. ရှုနိူင်သ်ှအပြင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနိူင်ပါသေးတယ်။ထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့အခါလည်းမိမိရဲ့ထုတ်လွှင့်မှု့ကိုလည်း Video file အဖြစ် Save ပေးထားမှာဖြစ်လို. Live မကြည်. လိုက်ရရင်တောင် Delay အနေနဲ့ပြန်လည်ကြည်. ရှုနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော.မိမိတို.ရဲ့
Metting,Vacation,Cemenor,Picnic,Treament ,Wedding .Birthday Party, Travel and Festival .etc…. များကိုရပ်ဝေးမြေခြားရောက်ရှိနေတဲ့မိမိတို.ရဲ့ဆွေမျိုး။မိတ်ဆွေ။ အပေါင်းအသင်းများထံသို.ကိုယ်ပိုင်LiveStreamတခုအနေနဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Screenshot လေးတွေနဲ့လေ့လာပြီးကိုယ်ပိုင် Live Stream Channel တခုလုပ်ကြရအောင်နော…
အဆင့် (၁)။။ မိမိတို. ရဲ့ဖုန်းတွင်အင်စတောလုပ်ရန်အတွက် Ustream Live Apk အား အောက်က link မှာ download ရယူပါ။
If you like my post, please visit at www.mmithelper.blogspot.com ( Myanmar IT Helper - Full Version Softwares ,Games & Premium Account )
အဆင့် (၂)။ အင်စတောလုပ်ပြီးလျှင် Open ဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရပါမယ်။
ပြီးလျှင် Go Live ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျ။ Register လုပ်ရန် Sign up ဖြင့်။
အဆင့် (၃) ။။ Register လုပ်ပြီးလျှင် ယခုအတိုင်းထပ်မံမြင်ရပါမယ်
အဆင့်(၄) ။။ မိမိရဲ့ ကွန်ပျုတာBrowser ပေါ်တွင်ယခုပေးသောလင့်ခ်အားဖွင့်ရပါမယ် ….. www.ustream.tv
အဆင့်(၅) ဒီပုံထဲကအတိုင်းမြင်ရပါမယ် Log in လုပ်ပေးရပါမယ်။Log in ကိုနှိပ်လိုက်လျှင် ရခုအတိုင်းမြင်ရပါမယ်။ မိမိရဲ့ Register လုပ်ထားသောလိပ်စာဖြင့် Log in နဲ့ထပ်မံပြီး .ဝင်ပေးလိုက်ပါ။
အဆင့်(၆)။။ ယခုကဲ့သို.မိမိရဲ့Name နဲ့ ထပ်မံမြင်ရပါမယ်။ မြင်ပြီးလျှင် အဝိုင်းပြထားတဲ့ Down arrow လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။။မိမိရဲ့ Name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လျှင်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် Live Stream Channel တခုကို ပုံပါအတိုင်းရရှိပြီးမိမိကြည်. စေလိုတဲ့ မိဘ၊မိတ်ဆွေ၊
အပေါင်းအသင်းများအား လင့်ခ်အား ပေးလိုက်လျှင်မိမိစိတ်ကြိုက်ထုတ်လွှင့်နိူင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်(၇) မိမိဖုန်းတွင် ပုံထဲကပြထားတဲ့အတိုင်း RECORDING ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့စတင်ထုတ်လွှင့်နိူင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Credit To=>Myanmar Mobile App